Mampiasà faharanitan-tsaina vitsivitsy ary ialao ny Captcha | Martech Zone
Angamba iray amin'ireo traikefa ratsy indrindra amin'ny mpampiasa izay tohizako hatrany tamin'ny tranonkala dia Captcha teknolojia.
Captcha dia rehefa sary namboarina nisy isa, litera, ary indraindray teny izay ilainao ny mametaka an-tsaha hafa. Izany dia mba hanoherana ireo paik'orinasa mandeha ho azy avy amin'ny mpandoka spam. Satria tsy azon'izy ireo ny mamorona ilay kaody, dia tsy afaka mandefa ireo hafatra diso izy ireo.
Teknolojia manelingelina io. Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho handefa hevitra na handefa hafatra amin'ny tranokala sasany ary tapahin'asan'ny Captcha aho. Mampijanona ny fikorianany izany ary mampiato ny traikefan'ny mpampiasa Tsy tantiko izany. Indraindray dia milavo lefona fotsiny aho ary mijanona tsy mitsidika ilay tranonkala na mampiasa ilay fitaovana.
Solosaina no mamorona azy. Ny zava-misy ateraky ny solo-sainanao dia milaza amiko fa indray andro any dia ho vaky solosaina izy io. Fotoana kely fotsiny izao.
izany kamo. Raha tokony halamina ny olana, dia tokony hiasa manodidina azy ilay mpampiasa.
Fanatonana tsaratsara kokoa
Nisy olon-droa nanontany ahy ny antony tsy nampiasako an'i Captcha rehefa nanoratra ny plugin plugin Form Comment aho. Tsy nampiasa izany aho satria te hanao ilay traikefa tsara kokoa, tsy ratsy kokoa, raha misoroka ny mpitsikera spam. Miaraka amin'ny faharanitan-tsaina kely fotsiny dia afaka manao ireo fanamby ireo ho fahafinaretana ireo orinasan-rindrambaiko fa tsy fanelingelenana.
Ny fanontaniako fanamby amin'ny ahy fifandraisana pejy Tsotra kely fotsiny, “ny teny farany amin'ny lohatenin'ny bilaogiko”. Saingy mahatonga ilay olona hitady iray segondra ary mety hihomehy mihitsy aza, ny tsy maintsy hidirany amin'ny "bilaogy". Mahafinaritra sy mora. Tsy misy fitambarana litera sy tarehimarika tsy misy loko, lavitra, tsy misy fotony. Fanontaniana tsotra fotsiny tsy hain'ny solosaina valiana - ny mpamaky ihany.
Facebook izao mampiasa Captcha
Ny orinasa farany lasibatry ny teknolojia an'ny Captcha dia Facebook. Tsy vitan'ny hoe maso feno fotsiny izany, fa zara raha azonao ny mamaky ilay zavatra dang. Nahafinaritra ny Facebook tamin'ny famolavolana fitaovana sy fidirana mangatsiaka tao amin'ny tranonkalany… tena nila nampiasa an'ity haitao adala ity ve izy ireo? Ratsy ny famarotana typepad sy ny hafa eo amboniny.
Mety hiady hevitra ny sasany fa "mandeha". Izy io dia miasa ihany amin'ny fanajana fa mamafa ny olana amin'ny tranokala izy ary mametraka izany amin'ny mpampiasa. Ity dia famolavolana tsy afa-miala tsiny ary misy fomba tsara kokoa! C'mon Facebook… makà fotoana, mamorona zavatra! Mahaiza mamorona.
14 Jul 2007 amin'ny 9:10 PM
Vahaolana iray vaovao toa ny captcha's dia ny HumanAuth (sy KittenAuth). Mitovy amin'ny hevitrao “teny farany amin'ny lohateny bilaogiko” ihany koa izany. Ny olombelona dia tsy maintsy mamaky clue ary manaporofo fa mahatakatra ny semantika an'io izy. Tsy mbola misy solosaina mahavita an'izany. Fa raha mihaino AI ianao, dia hihaino izy ireo atsy ho atsy! Akaiky ny zoro ihany, tena!
Raha toa ny HumanAuth na zavatra "fenitra" tsy zakan'ny solosaina ary hampiasaina be dia be, dia somary hanamaivana ny fahatapahana resahinao io.
FA, mbola mila mitandrina tsara amin'ny fampiharana ianao. Ny santionany HumanAuth izay vao nandeha ary nojereko indray dia misy lesoka! Amin'ny fotoana tsindrio ny sary 3 mety, dia manova bokotra iray izy hampahafantarana anao fa tsara ny azy. Tsy maninona izany, fa manome anao tsindry tsy manam-petra, noho izany, ny algorithman recursive tsotra dia afaka mamantatra ireo sary 3.
Tsotra ny hevitrao ary tsotra dia mazàna midika fa kely kokoa ny zavatra mety tsy mandeha.
Jul 15, 2007 amin'ny 6: 57 AM
Tsy nahalala momba ny HumanAuth sy KittenAuth aho… Handinika ireo haitao ireo aho!
Sep 4, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Tsy milaza aminao izany hoe manana "marina" ianao fa milaza aminao fotsiny fa manana sary telo voafantina ianao.
Jul 15, 2007 amin'ny 5: 40 AM
Hevitra mahaliana, na dia tsy azoko antoka aza fa mendrika an'io bilaogy io manokana…
Fa inona no tsy ataon'ny olona raha kely fotsiny ny sain'ny olona… 😉
Na izany na tsy izany, ny tranokalanay (http://ajaxwidgets.com) tsy manana captcha ho an'ny rafitry ny bilaoginay. Ary ny zava-misy dia 99.99% amin'ireo bilaogy spam rehetra no lavina noho ny tsy fiekenay ny HTML…!
Ho fanampin'izany dia mampiasa "kondom rohy" izahay ho an'ny saha URL izay manaisotra spam be dia be koa. Tsy dia mafy be daholo 🙂
Jul 15, 2007 amin'ny 6: 50 AM
Ny tanjoko dia tsy ny fifantohana, Thomas. Ny tena izy dia ny hitarika ny saina ho amin'ny haitao izay 'azo ekena' mahazatra nefa tsy sariaka amin'ny mpampiasa.
Ny ohatra asehonao amin'ny fiatrehanao azy dia ny ahy indrindra, misy tokoa ny fomba tsy dia manelingelina hiatrehana ilay olana.
Misaotra, Thomas! Ary tiako ireo widgets, ka hojereko ny tranonkalanao!
Jul 15, 2007 amin'ny 6: 45 AM
Tsy afaka miresaka momba an'i captcha ianao izay manaitra ireo sary mifototra amin'ny sary vizana sy marina.
Ny captcha dia mety ho zavatra maro, mifototra amin'ny lahatsoratra, fanontaniana sy valiny, foto-kevitra (alika kely indrindra ny alika kely indrindra) ary ireo dia haingana kokoa ampiasaina ary manome saina bebe kokoa ny fiezahana hamantatra raha izany dia 0 na XNUMX.
Miombon-kevitra aminao aho, ary mankahala azy ireo ihany koa aho, saingy ny lahatsoratranao dia tsy nahatafiditra ny velaran'ny lohahevitra manontolo, ary tsy nanolotra hevitra momba ny fanamboarana azy.
Jul 15, 2007 amin'ny 6: 54 AM
Manaiky aho - Tsy nahita vahaolana tsara indrindra aho… izany no antsoiko amin'ireo orinasa manana loharanom-pahalalana sy traikefa amin'ny mpampiasa. Ny antony nanosika ahy hanoratra ity lahatsoratra ity dia ny fahitako ny Facebook nampiasa an'ity teknolojia ity.
Tsy tsapako ihany koa fa ny teknolojia Captcha dia nifanindry ivelan'ny sary endri-tsoratra tsotra izay tokony halefan'ny mpampiasa. Raha manitatra ny dian-tongony ho lasa fanontaniana sy valiny sarotra ny teknolojia Captcha izay azo atao mba hanatsarana, fa tsy hanambaniana, ny zavatra niainan'ny mpampiasa, ho azy ireo aho!
Jul 15, 2007 amin'ny 7: 25 AM
Mampiasà anarana miovaova. Raha vantany vao tonga eo amin'ilay pejy ny mpampiasa dia mametraha cookie iray fivoriana izay misy isa maromaro. Avy eo omeo anarana ny taganao "input" = "hevitra __ [lohateny]", ary iray ho an'ny sisa amin'ny sahaninao.
Avereno avy eo ny isa isaky ny mitsidika ny pejy ny olona.
Izay dia hiantoka fa olona mandeha mankamin'ny pejy izy: mandritra ny fotoana kelikely.
Jul 15, 2007 amin'ny 7: 48 AM
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho. Ny CAPTCHA dia fanaintainana amin'ny…
Na izany aza, tena mora tokoa ny manoratra CAPTCHA tsy hita maso izay manao fikafika. Misy fomba maro isan-karazany anaovana azy.
Jul 15, 2007 amin'ny 8: 57 AM
Mety hanelingelina i Captcha's. Ny sasany mihoatra ny hafa. Nahita ny sasany izay tsy hay vakina (izay maharesy ny tanjona). Mampiasa ilay karazana Captcha "ratsy" nofaritanao tamina tetikasa vitsivitsy aho. Na izany aza, ataoko mora ny mamaky azy mba tsy hanakorontan'ny olombelona ny sainy mba hahalalany an'izany. Ary koa, "captcha" ihany no ataoko rehefa misoratra anarana ny mpampiasa fa tsy isaky ny manome fampidirana ao amin'ilay tranonkala izy ireo. Tsy rafitra tonga lafatra izy io, fa raisiko ho ambany noho ny antony mahasosotra ny olombelona izany.
Any ianao no mandeha, afaka manomboka manome isa an'i Captcha isika amin'ny “HAF” (Factor Annoyance Human), Spammer Annoyance Factor, sns.
Jul 15, 2007 amin'ny 9: 13 AM
Captcha vs. HAF. Tiako izany!
15 Jul 2007 amin'ny 12:19 PM
Tsy te hanambany ny plugin-nao aho fa efa misy fomba tsara lavitra hanivanana ny spam amin'ny WordPress. Misy plugin mahatalanjona izay ampiasaiko antsoina hoe SpamKarma ary mampiasa karazana heuristika rehetra hamaritana raha olona ity sa spam na tsia. Efa 1 1/2 na 2 taona teo ho eo no nampiasako azy io ary raha vao nanamarika ny hevitry ny olona ho toy ny spam ary tsy azo antoka izany dia nangataka tamin'ilay olona hameno captcha izy ary avelao ny fanehoan-kevitra. Mahazo fanehoan-kevitra spam an-jatony isan-kerinandro nefa tsy mamela na iza na iza handalo.
Halako koa ny captchas. Raha tena mila manoratra captcha aho dia tiako izany http://www.hotcaptcha.com/ satria ny fisafidianana ireo olona tsara tarehy na ireo biby volom-borona na ireo whatevers amin'ny andian-tsary dia tsy misy dikany ho an'ny olombelona ary tena sarotra ho an'ny script automatique.
15 Jul 2007 amin'ny 12:28 PM
Tsy mampiasa SpamKarma aho fa henoko izany. Mampiasa fitondran-tena ratsy aho ary mety hiatrika ny 10% amin'ny spam fanehoan-kevitra efa nataoko teo aloha fotsiny.
Hizaha Hot Captcha aho - mitovy amin'ny zavatra tiako ho hita izany.
15 Jul 2007 amin'ny 12:23 PM
Tsy misy dikany ity lahatsoratra ity. Tsy mitombo ny vahaolana arosonao. Ny "bot" iray dia azo alamina mora foana handingana ny fepetra fiarovana amin'ny alàlan'ny famenoana ny "bilaogy" isaky ny mandeha. Ny vahaolana dia misy fanontaniana maromaro voafetra - fanontaniana maro araka izay tianao soratana. Ahoana no fomba fampiharana ny facebook, ny ticketmaster na ny yahoo?
Ity lahatsoratra ity dia nampihomehy fotsiny mba hisarika ny saina sy hampiakatra ny vola miditra amin'ny doka. Tsy maintsy manandrana mafy kokoa ianao amin'ny "fanoroana" ity bilaogy ity. Hanomboka amin'ny atiny mendrika vakiana aho.
15 Jul 2007 amin'ny 12:34 PM
Wow, Mat. Misy olona somary misento kely anio.
Toa tsy namaky ny lahatsoratro ianao. Tsy nilaza mihitsy aho hoe hitombo ny vahaolana ary tsy tokony hataon'ireto orinasa ireto. I nanao lazao fa te-hahita orinasa vitsivitsy (toa ny Facebook) aho miaraka amin'ny vahaolana malina kokoa. Ny plugin-ko dia mamela anao hanova ny fanontaniana sy valiny fanamby isaky ny tianao - tsy misy bot hanaraka an'io. Hatramin'izao dia mbola tsy nanana SPAM tamin'ny pejiko nifandray tamin'ity vahaolana ity aho.
Ohatra iray: angamba mety hahazo tombony amin'ny fanaovana doka amin'ny pejy ny Facebook ary manontany hoe "Iza ny doka ato amin'ity pejy ity?". Ny zavatra rehetra dia tsara kokoa noho ny famoahana isa maromaro sy litera - raha tena azonao atao ny mamaky azy ireo.
Cheers! Aza hadino ny misoratra anarana! hehe
Jul 16, 2007 amin'ny 9: 12 AM
Ny “Iza ny doka eto amin'ity pejy ity” dia hevitra mahaliana. Nahita azy nampiharina teo amin'ny tranokala antsoina hoe Moola.com aho teo aloha. Na izany aza, ampiasain'izy ireo manokana ho fomba iray itarihana ny saina amin'ireo mpanao dokambarotra azy ireo (toy ny interstitial) fa tsy fomba fisorohana spam.
Ny sasany amin'izy ireo aza dia hanery anao hijery horonantsary doka 20 segondra ary avy eo hamaly fanontaniana toy ny hoe "Iza no orinasa hanaovana an'io doka io?" Na dia tsy mpankafy an'io fomba manokana io aza aho (mankahala ny miandry), dia mahaliana ny mahita ny zavatra toa izany manao fidiram-bola.
15 Jul 2007 amin'ny 4:30 PM
Ankoatry ny antony mahasosotra, izay goavambe, ny CAPTCHA dia tsy azo aleha matetika ho an'izay tsy manana fahitana lavorary.
Alao an-tsaina ny CAPTCHA izay hitanao fa sarotra vakiana ary avelao handeha ny olona tsy mahita tsara. Sarotra? Saika tsy azo atao mihitsy.
Ahoana ny olona tsy manana fahitana mihitsy, mitety Internet amin'ny mpamaky efijery na teknolojia braille. CAPTCHA dia noforonina hany ka tsy afaka mamaky azy io ny programa. Amin'ity tranga ity dia tsy hanao izany koa ny mpampiasa sembana.
Misy vitsivitsy CAPTCHA azo idirana, ireo izay misy feo CAPTCHA ho an'ireo izay tsy mahita dia ohatra, fa ny olana momba ny fampiasana fanampiny dia nahatonga azy io ho teknolojia izay tsy heveriko mihitsy ny hampiharina. Kapohy amin'ny fomba hafa ny spammers, aza omena vola ny tena mpampiasa anao (ary koa ny antony ampiasako ilay plugin dofollow).
15 Jul 2007 amin'ny 8:43 PM
Captchas dia tsy ratsy. Ratsy ny captchas ratsy. Raha tena sarotra ny mamantatra azy ireo fa tsy azonao vakina dia ratsy izany.
Saingy heveriko fa ny vahaolana tsara kokoa dia ny fanontaniana matematika ifotony, telo miova:
1. Isa 1 (0-9)
2. Isa 2 (0-9)
Vita izany dia mora tokoa ny matematika, ary azonao atao ny mamantatra hoe inona ny valiny avy amin'ny fomba fijerin'ny script fa tsy mora kokoa.
Jul 16, 2007 amin'ny 9: 13 AM
Ny vahaolana madio nifanena tamiko tany amin'ny toerana iray dia ny boaty misy ny boaty mitondra ny lohateny hoe "spammer aho", izay tonga tampoka tsy voamarina. Marina fa ilaina kokoa amin'ny sehatry ny fisorohana ny fisoratana anarana mandeha ho azy fa tsy amin'ny hevitra (satria matetika ny bilaogy dia tsy manana boaty fanamarinana mila fanamarinana).
Mazava ho azy amin'ny farany fa fotoana kely fotsiny io alohan'ny handraisan'ny AI izany. Saingy heveriko fa tsy misy vahaolana tonga lafatra noho ny robot tsy ho tapaka mihitsy, noho izany dia ampy tsara izany ary tsy manelingelina ny zavatra niainan'ny mpampiasa mihitsy (raha tsy hoe, mazava ho azy, mihevitra ianao fa spammer…)
Jul 16, 2007 amin'ny 9: 18 AM
Fa inona no misy amin'ireo fanehoan-kevitra ratsy momba ity lahatsoratra ity izay “manintona ny saina”? Hatramin'ny oviana no ratsy ny nanampy ny feonao hiresaka ilay dinika. Heck, miaraka amin'ny fanehoan-kevitra 17 sahady, mazava ho azy fa lohahevitra iray tian'ny olona izy.
Ankoatr'izay, raha ity no lohahevitra mahasarika ny sain'ny olona, ​​maninona no tsy te-hitoraka bilaogy momba izany ianao?
Jul 17, 2007 amin'ny 11: 34 AM
Ahoana no tsy CAPTCHA?
Marina, tsy ireo litera namboarina tamin'ny sary grains artifisialy, fa zavatra manandrana manavaka ny solosaina sy ny olombelona.
May 20, 2008 amin'ny 10: 55 AM
Ie, ekeko fa somary mahasosotra ny captchas, ary azafady fa tsapako fa sakana ho an'ireo mpampiasa sembana izy ireo, saingy vao haingana aho
raved momba ny fankasitrahako ny maha-izy azy roa ny rafitra reCaptcha, satria manakana ny spam (na dia tsy mahomby 100%, araka ny navoitranao) na dia manampy amin'ny famoahana ireo boky aza aho, ary mbola mpankafy aho.
Tsy misy iadian-kevitra ny vokadratsin'izy ireo amin'ny traikefan'ny mpampiasa, saingy tokony hiaiky ianao fa ny fampiasana ezaka kely avy amin'ny mpikambana tsirairay avy amin'ny dobo olona be dia be mba hanao izay tsy azon'ny solosaina tena be loha (vakio ny lahatsoratra voangory izay manohitra ny fanekena ny endri-tsoratra Optical) dia tsara tarehy vahaolana.
Na dia amin'ny ankapobeny aza, eny, izaho rehetra dia nampiasa ny famoronana fa tsy kaody raha azo atao.
15 Mey 2009 tamin'ny 6:59 hariva
Lahatsoratra fohy tsara. Izaho koa dia tsy miombon-kevitra amin'ny lelafo momba ny mety ho fikasan'ny hafatrao. Indrindra fa ny hafa dia manondro ny tsy fahaizanao manome "valiny" na "safidy", izay azoko nianiana anao fa nataonao tamin'ny plugin-form-comment-nao sy ny fifanakalozan-kevitra momba ny pejin'ny fifandraisanao (sa nisy zavatra tsy azoko? 😉 Heveriko fa be loatra ny olona mamorona hevitra (ary zarao) raha tsy manelingelina mamaky na dia lahatsoratra somary fohy aza, toa ity iray ity, alohan'ny handosiran'izy ireo (izay mahavita manaraka ny tsy misy)
Adihevitra mahaliana ity ary, na inona na inona vahaolana alefa, mendrika soratana raha tianao. Ny bilaoginao rahateo ary - ity no tena manelingelina ahy indrindra amin'ireo hevitra sasany - hatramin'ny oviana no lasa andraikitry ny besinimaro ny fanaovana bilaogy? Raha te hanoratra zavatra iray ianao dia soraty izany. Izay rehetra tsy te hamaky dia manana safidy tsy hamaky azy io. Raha mandoa vola ianao, dia tantara hafa izany, saingy, raha marina ny ahy, ireo weblog dia nipoitra avy amin'ny fanirian'ny besinimaro hamoaka na inona na inona ary / na izay rehetra tonga ao an-dohan'izy ireo ary hamoaka izany mba haseho ampahibemaso, na hanamorana ny fizarana amin'ny namana. Betsaka ny atin'ny bilaogy tsy azo idirana ampahibemaso na mahaliana an'ireo tsy tafiditra mivantana aza.
Tsy maintsy nihomehy aho rehefa namaky momba ny fampiasana an'ity lahatsoratra ity hanatsarana ny fidiram-bolanao. Angamba (ary antenaiko izany) ny zavatra niainanao dia tsara kokoa noho ny ahy, saingy - raha tsy hoe mitoraka bilaogy ianao mba hampiroboroboana vokatra iray - azonao atao ny manoratra momba ny captcha na afaka manoratra momba ny fofona alika mamy sy ny rafitra doka misy anao. mandoa amin'ny taham-pahavoazana tsy ampoizina amin'ny toe-javatra roa 😉
Raha lazaina izany, raha mamaky ireo mpanao CAPTCHA dia misaotra anao nanampy ny audio! Tany mainty miaraka amina vodin-drambo mikotrokotroka izay misy soratra fotsy fotsy (sy diso faran'izay diso) apetraka (indraindray eo an-tsisin'ilay sary) dia ohatra tonga lafatra amin'ny toe-javatra iray izay ahitan'ny olona manana fahitana tena mendrika ho sarotra ny mamaritra azy, programa dia mety hamaha mora foana rehefa mandeha ny fotoana.
Ny céno 2 ahy fotsiny,
Mirary soa indrindra ho anao,